Semalt: Ny tokony ho fantatra momba ny SEO eo an-toerana
Ny fomba fiasan'ny orinasa madinika dia mitarika asa, miditra an-tsenaNiova ny traikefa nandritra ny taona. Ny fitaovam-pikarohana ihany koa dia nanatsara ny fanatsarana sy ny fanavaozana, noho izany dia mora kokoa ny androanyOlona hitady orinasa, serivisy sy vokatra an-tserasera. Ireo rehetra ireo dia nanova ny fitadiavan'ny mpampiasa, izay midika hoe fifaninananadia mitombo - edimax pri.
Raha mpampiasa ianao dia tsy voatery hiteny ny toerana misy anaofangatahana hitady ny serivisy eo akaiky. Ny SEO ao an-toerana dia hanao izany ho anao. Ny marina dia lasa nilaina ny SEO teo an-toerana fa ny ankamaroanyTsy nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny orinasa ny olona. Androany, raha tsy tafapetraka ny orinasa, dia hisy iray hafa ary izany raharaham-barotra izanydia hanana safidy lehibe kokoa amin'ny fifamoivoizana, fitarihana ary fivarotana.
Oliver King, mpitantana ny Success Successor Semalt Ny serivisy nomerika dia mitantara ny lafin'ny SEO eo an-toerana izay tokony ho fantatrao mba haka tombony amin'ny orinasanao.
Mbola matoky ny fialan-tsasatra hatrany ny mpanjifa tanora
Ny fandraharahana eo an-toerana dia tokony handeha haingana dizitaly mba hahatonga azy ireo ho mora amin'ny mpanjifa eo an-toeranamba hifandray amin'izy ireo. Ny Millennials izay mamorona ny mpanjifa ambony indrindra dia miankina amin'ny tatitra an-tserasera sy ny fitaovam-pikarohana rehefa manamarinaamin'ny orinasa eo an-toerana. Ny ankamaroan'ireo mpikaroka ireo dia tsy manana raharaham-barotra manokana. SEO eo an-toerana no manome anao fahafahana hifandraymiaraka amin'ny millenials sy ny fiara ary ny fivarotana azy ireo. Amin'ny SEO eo an-toerana dia manome ny anaran'ny orinasa, nomeraon-telefaona ary adiresy ianaoireo mpampiasa ireo ho mpanjifa eo an-toerana..
Ny fanoritsoritana sy ny anaram-bosotra ny votoatinao dia mbola singa manan-danjany fanentanana ara-barotra satria maneho ny raharaham-barotrao sy ny fomba fijery azy amin'ny valin'ny fikarohana. Google dia nitombo ny sakanyamin'ny tsanganana valin'ny fikarohana, ity dia manome fahafahana anao hanangana lohateny sy fanoritsoritana ho an'ny orinasanao. voarafitrafampahalalana momba ny angon-drakitra fantatra amin'ny anarana hoe schema marke, manampy ny Google hanova ny tranokalanao, hahafantatra ny zavatra ao anatiny ary haka vaovaomomba ny raharahanao sy ny zavatra atolotrao.
Ireo lisitra sy fanadihadiana an-tserasera dia manan-danja
Aza hadino na oviana na oviana ny lisitry ny orinasa an-tserasera noho izy ireo tsy tapakanitsidika ny mpanjifa. Ny fampahalalana anao dia tokony ho eo amin'ny lisitry ny lisitry ny orinasa eo an-toerana mba hanorenana laza tsara.Ireo fampatsiahivana an-tserasera ihany koa dia manan-danja satria natoky ny mpanjifa izy ireo ary afaka manatsara ny lazanao. Ny fampahalalana asehonaodia tokony hampiditra ny ora fisokafany, karazana fandoavam-bola, sokajy, ary famaritana.
Miara-miasa ny SEO sy ny fampiroboroboana any an-toerana
Ny ampahany betsaka amin'ny fanadihadiana an-tserasera dia avy amin'ny fitaovana finday. izanymamorona fahafahana ho an'ny orinasa any an-toerana handray tombony amin'ny fikarohana finday ao an-toerana. Tokony hampiasa mivantana finday ianaofifamoivoizana sy fivarotana amin'ny orinasanao noho ireto statistika manaraka ireto:
4 amin'ny mpanjifa dimy mampiasa smartphone
Ny antsasaky ny mpanjifa manao fikarohana ao an-toerana amin'ny findaymitsidika ny fivarotana ara-batana raha ampitahaina amin'ny 34 isan-jaton'ny mpampiasa solosaina sy tabilao.
18 isan-jaton'ny fikarohana natao teo an-toerana amin'ny finday dia mitarika ho amin'ny fividianana.
90 isan-jaton'ny mpanjifa dia maniry ny doka mifanaraka amin'ny code codes
Ny SEO any an-toerana dia tsy ho faty na oviana na oviana raha vantany vao omena fahafahana mety ianaohahatratra ny mpanjifanao. Efa nandalo fiovana nandritra ny taona maro ny SEO eo an-toerana, mety tsy ho mora ny manao izany marketing izany eo an-toeranaandro fa ny fahafantaranao ny tetika tena izy dia hitarika anao hisarika ny mpifaninana aminao.